परमेश्वरको प्रेम, दया र बुद्धि देखासिकी गर्नुहोस् | अध्ययन
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इलोको इसोको उज्बेक उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा करेन (गः) काजाक किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कोंगो कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) गाउरानी गुजराती गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चुभास चेक चोवे जर्जियन जर्मन जापटेक (इस्मस) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा टगालोग टर्कमेन टर्कमेन (सिरिलिक) टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन डच डेनिश ड्रेहु ताजिकी तामिल तेलगु थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बाटाक (टोबा) बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज मङ्गोलियन मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी मिहे मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रुन्यानकोर रूसी रोमानियन लाट्भियन लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हौसा
“प्यारा केटाकेटीहरूझैं परमेश्वरको देखासिकी गर्नेहरू होओ।” —एफि. ५:१.
येशूले के-कस्ता तरिकामा यहोवाका गुणहरू झल्काउनुभयो?
हामी कसरी प्रेम र यहोवाका अन्य गुणहरूको देखासिकी गर्न सक्छौं?
हामीले किन आफ्नो सोचाइलाई काबूमा राख्नै पर्छ?
१. हामीमा भएको कस्तो क्षमताले हामीलाई यहोवाको देखासिकी गर्न मदत गर्छ?
आफूलाई अरूको ठाउँमा राखेर हेर्न सक्ने विशेष क्षमता यहोवाले हामीलाई दिनुभएको छ। आफूले कहिल्यै अनुभव नगरेको परिस्थितिबारे समेत हामी केही हदसम्म कल्पना गर्न सक्छौं। (एफिसी ५:१, २ पढ्नुहोस्) यहोवाबाट पाएको यस्तो क्षमताको हामी कसरी सदुपयोग गर्न सक्छौं? यस्तो क्षमताको दुरुपयोग गर्नदेखि हामी कसरी जोगिन सक्छौं?
२. हामीले दुःख भोगेको देख्दा यहोवालाई कस्तो लाग्छ?
२ वफादार अभिषिक्त जनहरूलाई स्वर्गमा अमर जीवन दिने अनि येशूका “अरू भेडा”-लाई पृथ्वीमै अनन्त जीवन दिने यहोवाको प्रतिज्ञाबारे थाह पाएकोले हामी खुसी छौं। (यूह. १०:१६; १७:३; १ कोरि. १५:५३) स्वर्गमा अमर जीवन पाउने अनि पृथ्वीमा अनन्त जीवन पाउने व्यक्तिहरूले अहिलेको जस्तो दुःख र पीडा भोग्नु पर्नेछैन। तर यहोवाले अहिले हामीले भोग्नुपरेको दुःख राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। इस्राएलीहरू मिश्रको दासत्वमा छँदा यहोवाले उनीहरूको अवस्था राम्ररी बुझ्नुभएको थियो। त्यसैले “तिनीहरूका सारा दुःखमा उहाँ दुःखित हुनुभयो।” (यशै. ६३:९) मिश्रको दासत्वबाट छुटेको सयौं वर्षपछि यहूदीहरूले मन्दिर पुनर्निर्माण गरिरहेको बेला शत्रुहरूबाट विरोध आयो। त्यतिबेला तिनीहरू डराए तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई यसरी सान्त्वना दिनुभयो, “जसले तिमीहरूलाई छुन्छ त्यसले [मेरो] आँखाको नानीलाई छुन्छ।” (जक. २:८) एउटी आमाको मनमा आफ्नो बच्चाको लागि स्नेह भएजस्तै यहोवा पनि आफ्ना जनहरूलाई स्नेह देखाउनुहुन्छ अनि उनीहरूलाई मदत गर्न कदम चाल्नुहुन्छ। (यशै. ४९:१५) यसको मतलब यहोवा आफूलाई अरूको ठाउँमा राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ र उहाँले हामीलाई पनि त्यस्तो क्षमता दिनुभएको छ।—भज. १०३:१३, १४.
येशूले कसरी यहोवाले जस्तै प्रेम देखाउनुभयो?
३. येशू अरूको अवस्था राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो भनेर केले देखाउँछ?
३ येशूले अरूको पीडा महसुस गर्नुभयो, जबकि उहाँ आफैले त्यस्तो पीडा कहिल्यै भोग्नुभएको थिएन। जस्तै: उहाँको समयका साधारण मानिसहरू यहूदी धर्मगुरुहरूको डरैडरमा बाँचिरहेका थिए। ती धर्मगुरुहरूले मानिसहरूलाई छक्याइरहेका थिए; मानिसले बनाएका नियमको भारी बोकाएर उनीहरूलाई दुःख दिइरहेका थिए। (मत्ती २३:४; मर्कू. ७:१-५; यूह. ७:१३) हुन त येशू ती धर्मगुरुहरूसित डराउनुभएन र तिनीहरूको बहकाउमा पनि पर्नुभएन। तैपनि उहाँले ती धर्मगुरुहरूको कारण दुःख पाएका मानिसहरूको अवस्था राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसैले “भीडलाई देखेर उहाँ टिठाउनुभयो किनभने तिनीहरू छाला काढिएका अनि गोठालो नभएर तितरबितर भएका भेडाहरूजस्ता थिए।” (मत्ती ९:३६) येशू आफ्नो बुबाले जस्तै अरूलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो र अरूको अवस्था राम्ररी बुझ्नुहुन्थ्यो।—भज. १०३:८.
४. अरूको दुःख देखेर येशूले के गर्नुभयो?
४ येशू मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण उनीहरूले दुःख पाइरहेको देख्दा उनीहरूलाई मदत गर्न उत्प्रेरित हुनुभयो। यसरी उहाँले आफ्नो बुबाको देखासिकी गर्नुभयो। एकपटकको कुरा हो, लामो समय प्रचार गरिसकेपछि येशू आफ्ना चेलाहरूसित एकान्तमा गएर आराम गर्न लाग्नुभएको थियो। तर उहाँलाई कुरेर बसिरहेको एउटा ठूलो भीड देखेपछि उहाँ टिठाउनुभयो अनि “तिनीहरूलाई धेरै कुरा सिकाउन थाल्नुभयो।”—मर्कू. ६:३०, ३१, ३४.
हामी कसरी अरूलाई यहोवाले जस्तै प्रेम गर्न सक्छौं?
५, ६. हामी कसरी अरूलाई यहोवाले जस्तै प्रेम गर्न सक्छौं? उदाहरण दिनुहोस्। (शीर्षकमाथिको तस्बिर हेर्नुहोस्)
५ अरूसित व्यवहार गर्दा हामी यहोवाको देखासिकी गर्न सक्छौं। एउटा परिस्थिति विचार गरौं। अनिल भन्ने एक ख्रीष्टियन युवा मण्डलीका एक जना वृद्ध भाइबारे सोच्दै छन्‌। आँखा कमजोर भइसकेकोले ती वृद्ध भाइले अक्षर राम्ररी ठम्याउन सक्दैनन्‌। तिनलाई घरघरको प्रचारमा जाँदा हिंड्न पनि गाह्रो हुन्छ। अनिल येशूले भन्नुभएको यो कुरा सम्झन्छन्‌, “मानिसहरूले तिमीहरूलाई जे जसो गरून्‌ भन्ने तिमीहरू चाहन्छौ, तिमीहरूले पनि तिनीहरूलाई त्यसै गर।” (लूका ६:३१) त्यसपछि उनी आफैलाई यसरी सोध्छन्‌, ‘अरूले मसित के गरेको चाहन्छु?’ अनि आफैलाई यस्तो जवाफ दिन्छन्‌, ‘अरूले मसित बल खेलेको चाहन्छु!’ तर के ती वृद्ध भाइले बल खेल्न सक्छन्‌ त? अहँ, सक्दैनन्‌। त्यसकारण येशूको आज्ञा मान्ने हो भने हामीले वास्तवमा आफूलाई अरूको ठाउँमा राख्नुपर्छ र यस्तो प्रश्न सोध्नुपर्छ, ‘म तिनको ठाउँमा भएको भए अरूले मेरो लागि के गरेको चाहन्थें?’
६ आफू वृद्ध नभए पनि अनिलसित ती वृद्ध भाइको अवस्था बुझ्न सक्ने क्षमता छ। उनी ती भाइको अवस्था राम्ररी नियाल्छन्‌ र तिनको कुरा ध्यान दिएर सुन्छन्‌। उनले बिस्तारै ती वृद्ध भाइको अवस्था बुझ्न थाल्छन्‌। तिनलाई बाइबल पढ्न र घरघरको प्रचारमा जान गाह्रो छ भन्ने कुरा अनिलले थाह पाउँछन्‌। आफूलाई ती भाइको ठाउँमा राखेर हेरेपछि तिनलाई मदतको खाँचो छ भन्ने कुरा अनिलले बुझ्छन्‌ र तिनलाई मदत गर्न अग्रसर हुन्छन्‌। हामी पनि त्यसै गर्न सक्छौं। आफूलाई अरूको ठाउँमा राखेर हेऱ्यौं भने यहोवाको देखासिकी गर्न सक्नेछौं र अरूलाई उहाँले जस्तै प्रेम गर्न सक्नेछौं।—१ कोरि. १२:२६.
यहोवाको देखासिकी गर्दै अरूलाई प्रेम गर्नुहोस् (अनुच्छेद ७ हेर्नुहोस्)
७. हामी कसरी अरूको भावना बुझ्न सक्छौं?
७ अरूको दुःख बुझ्न सधैं सजिलो हुँदैन। थुप्रै मानिसले हामीले कहिल्यै अनुभव नगरेको समस्या भोगिरहेका हुन्छन्‌। कोही-कोही कुनै गम्भीर चोटपटक, रोग वा वृद्धावस्थाको कारण शारीरिक रूपमा कमजोर भएका छन्‌। कोही-कोही डिप्रेसनको सिकार भएका छन्‌। कसै-कसैलाई भने दुःखद घटनाको नमीठो सम्झनाले गर्दा अकस्मात्‌ छटपटी हुन्छ वा विगतमा भोग्नुपरेको दुर्व्यवहारको सम्झनाले गर्दा असह्य पीडा हुन्छ। यी कुराहरूले गर्दा तिनीहरू भावनात्मक रूपमा कमजोर भएका छन्‌। अर्कोतर्फ, कोही कोहीचाहिं यहोवाको सेवा नगर्ने परिवारसित बस्छन्‌ अनि कसै-कसैले भने एक्लैले छोराछोरी हुर्काउँछन्‌। हरेकको आ-आफ्नै समस्या छ अनि तीमध्ये केही समस्या त हामीले कहिल्यै भोगेका छैनौं। त्यस्तो अवस्थामा हामी कसरी यहोवाको देखासिकी गर्दै अरूलाई प्रेम गरेको देखाउन सक्छौं? कसैले आफ्नो कुरा बताउँदा ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। यसो गऱ्यौं भने केही हदसम्म भए पनि तिनको भावना बुझ्न सक्छौं अनि यहोवाको देखासिकी गर्दै मदतको हात बढाउन सक्छौं। हुन त कस्तो मदत दिने भन्ने कुरा व्यक्तिअनुसार फरक हुन्छ। तैपनि हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बाइबलबाट प्रोत्साहन दिन सक्छौं अनि व्यावहारिक मदत दिन सक्छौं।—रोमी १२:१५; १ पत्रुस ३:८ पढ्नुहोस्।
यहोवाजस्तै दयालु हुनुहोस्
८. अरूसित दयालु व्यवहार गर्न येशूलाई केले मदत गऱ्यो?
८ परमेश्वरका छोरा येशूले यसो भन्नुभएको थियो, “सर्वोच्च परमेश्वर . . . बैगुनी र दुष्टहरूप्रति दयालु हुनुहुन्छ।” (लूका ६:३५) येशू आफै पनि यहोवाजस्तै दयालु हुनुहुन्थ्यो। अरूसित दयालु व्यवहार गर्न येशूलाई केले मदत गऱ्यो? आफ्नो बोली र कामले अरूको भावनामा कस्तो असर गर्न सक्छ भन्ने कुरा उहाँ सधैं विचार गर्नुहुन्थ्यो। एकपटकको कुरा हो, समाजमा पापीनी भनेर चिनिएकी एउटी स्त्री येशूकहाँ आई अनि रुँदै उहाँको पाउ आँसुले भिजाउन थाली। उसलाई आफ्नो पापको पछुतो छ भन्ने कुरा येशूले बुझ्नुभयो। उसलाई रुखो व्यवहार गऱ्यो भने उसको मनमा कत्ति चोट पुग्ला भन्ने कुरा उहाँले विचार गर्नुभयो। त्यसैले उहाँले त्यो स्त्रीको प्रशंसा गर्नुभयो र क्षमा दिनुभयो। येशूको अतिथिसत्कार गर्ने फरिसीलाई उहाँले ती स्त्रीसित गरेको व्यवहार मन परेन। तर येशू ऊसित पनि दयालु भई बोल्नुभयो।—लूका ७:३६-४८.
९. हामी कसरी यहोवाजस्तै दयालु हुन सक्छौं? उदाहरण दिनुहोस्।
९ हामी पनि कसरी यहोवाजस्तै दयालु हुन सक्छौं? प्रेषित पावलले यस्तो लेखेका थिए, “प्रभुको दासले झगडा गर्नुहुँदैन, बरु ऊ यस्तो मानिस हुनुपर्छ, जसले सबैसित कोमल व्यवहार गर्छ।” (२ तिमो. २:२४) कोमल व्यवहार गर्नु भनेको अरूको परिस्थिति बुझेर व्यवहार गर्न सक्नु हो। निम्न परिस्थितिमा हामी कसरी दयालु हुन सक्छौं, विचार गर्नुहोस्: तपाईंको अफिसमा माथिल्लो तहको कामदारले आफ्नो काम राम्ररी गरिरहेका छैनन्‌। तपाईं के गर्नुहुन्छ? एक जना भाइ महिनौंपछि सभा आउँछन्‌। तपाईं तिनलाई के भन्नुहुन्छ? प्रचारकार्यमा घरधनीले “म अहिले अति नै व्यस्त छु” भन्छन्‌। त्यतिबेला तपाईं के गर्नुहुन्छ? तपाईंकी श्रीमतीले “शनिबारको योजनाबारे किन पहिल्यै नबताउनुभएको” भनेर सोध्छिन्‌। के तपाईं दयालु भई जवाफ दिनुहुन्छ? आफूलाई अरूको ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्छ अनि आफ्नो बोलीले अरूलाई कस्तो असर गर्न सक्छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ। यसो गऱ्यौं भने यहोवाको देखासिकी गर्दै आफ्नो बोली र काममा दयालु हुन सक्छौं।—हितोपदेश १५:२८ पढ्नुहोस्।
यहोवाको देखासिकी गर्दै बुद्धिमान्‌ हुनुहोस्
१०, ११. हामी कसरी यहोवाको देखासिकी गर्दै बुद्धिमान्‌ हुन सक्छौं? उदाहरण दिनुहोस्।
१० हामीसित आफूले कहिल्यै अनुभव नगरेको परिस्थितिबारे समेत कल्पना गर्न सक्ने क्षमता छ। यस्तो क्षमताले हामीलाई यहोवाको देखासिकी गर्दै बुद्धिमान्‌ हुन र आफूले गर्ने कामको नतिजा कस्तो हुन सक्छ भनेर बुझ्न पनि मदत गर्छ। यहोवाका प्रमुख गुणहरूमध्ये एउटा बुद्धि पनि हो। त्यसकारण आफूले चाहेको खण्डमा यहोवा कुनै कामको परिणाम कस्तो हुन्छ भनेर पहिल्यै थाह पाउन सक्नुहुन्छ। हुन त हामीसित त्यस्तो क्षमता छैन। तैपनि हामीले गर्न लागेको कामले कस्तो नतिजा निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुराचाहिं विचार गर्न सक्छौं। यहोवाको आज्ञा नमान्दा कस्तो दुःख भोग्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने कुरा इस्राएलीहरूले विचार गरेनन्‌। इस्राएलीहरूले यहोवाले उनीहरूको लागि गरिदिनुभएको असल कामहरूको कदर नगरेको मोशाले देखेका थिए। त्यसैले उनीहरूले यहोवालाई मन नपर्ने काम गर्नेछन्‌ भनेर तिनलाई थाह थियो। इस्राएलीहरूका सारा समुदायको सामु तिनले यस्तो गीत गाए, “तिनीहरू परामर्श नपाएको जाति हो, औ तिनीहरूमा केही समझ शक्ति नै छैन तिनीहरू बुद्धिमान्‌ भए यो कुरा बुझ्ने थिए तिनीहरूले आफ्ना अन्त बुझ्ने थिए।”—व्यव. ३१:२९, ३०; ३२:२८, २९.
११ हामी आफ्नो कामको नतिजाबारे सोच्छौं वा त्यसबारे कल्पना गर्छौं भने यहोवाको देखासिकी गर्दै बुद्धिमान्‌ हुने प्रयास गरिरहेका हुन्छौं। जस्तै, तपाईं आफ्नो भावी श्रीमान्‌ वा श्रीमतीसित विवाहअघि भेटघाट गर्दै हुनुहुन्छ भने यौन इच्छालाई काबूमा राख्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा नबिर्सनुहोस्। यहोवासित गाँसेको सम्बन्धलाई खतरामा पार्ने कुनै पनि काम गर्नदेखि जोगिनुहोस्। बाइबलको यो सल्लाहअनुसार चल्नुहोस्, “चतुर मानिस दुःख आएको देखेर जोगिन्छ, तर सीधा-साधा त्यसमा पर्छ र दण्ड भोग्छ।”—हितो. २२:३.
आफ्नो सोचाइलाई काबूमा राख्नुहोस्
१२. हाम्रो सोचाइ कसरी हानिकारक हुन सक्छ?
१२ चतुर मानिसले आफ्नो सोचाइ एक अर्थमा आगोजस्तै हो भन्ने कुरा बुझेको हुन्छ। आगोलाई सही तरिकामा प्रयोग गऱ्यौं भने यो निकै फाइदाजनक हुन्छ। जस्तै, खाना पकाउन। तर आगोलाई नियन्त्रण गरेनौं भने यसले पूरै घर र त्यहाँ भएका सबै थोक सखाप पारिदिन सक्छ। त्यसैगरि, हाम्रो सोच्ने क्षमताले हामीलाई यहोवाको देखासिकी गर्न मदत गर्छ। तर अर्कोतर्फ, कसैले यौन अनैतिकताबारे सोचिरहन्छ भने त्यो हानिकारक हुन सक्छ। उदाहरणको लागि, उसले छाडा कामहरूबारे कल्पना गरिरहन्छ भने त्यो उसको काममा देखिन कत्ति पनि बेर लाग्दैन। साथै, यहोवासित उसले गाँसेको सम्बन्ध पनि खत्तम हुन सक्छ।—याकूब १:१४, १५ पढ्नुहोस्।
१३. हव्वाले कस्तो जीवनबारे कल्पना गरेकी हुन सक्छिन्‌?
१३ पहिलो स्त्री हव्वामा “असल र खराबको ज्ञान दिने रूखको फल” खाने इच्छा कसरी जाग्यो, विचार गरौं। (उत्प. २:१६, १७) सर्पले तिनलाई यसो भन्यो, “तिमीहरू कदापि मर्दैनौ। किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खुल्नेछन्‌, र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू पनि परमेश्वरजस्तै हुनेछौ।” सर्पको कुरा सुनेपछि हव्वाले “त्यस रूखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहरलाग्दो” देखिन्‌। नतिजा कस्तो भयो? “तिनले त्यस रूखको फल टिपेर खाइन्‌, र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन्‌, औ तिनले पनि खाए।” (उत्प. ३:१-६) सैतानको कुरा हव्वालाई ठीक लाग्यो। त्यो फल खायो भने कसैको अधीनमा बस्नुपर्दैन, बरु के सही र के गलत भनेर आफैले निर्णय गर्न पाइन्छ जस्तो तिनलाई लाग्यो। तर तिनले त्यस्तो सोचाइ राखेकीले नतिजा नराम्रो भयो। आदमले यहोवाको आज्ञा तोडे र उनी पापी भए। उनीद्वारा “पाप संसारमा प्रवेश भयो अनि पापद्वारा मृत्यु।”—रोमी ५:१२.
१४. अवैध यौनसम्बन्धबाट अलग रहन बाइबलले कस्तो चेतावनी दिएको छ?
१४ अदनको बगैंचामा हव्वाले गरेको पापमा अवैध यौनसम्बन्ध मुछिएको थिएन। तर कुनै अनैतिक काममा संलग्न भएको कल्पना गरिरहनु गलत हो भनेर येशूले चेतावनी दिनुभयो। उहाँले यसो भन्नुभयो, “म तिमीहरूलाई भन्छु, जसले कुनै स्त्रीलाई हेरिरहन्छ र आफूमा कामवासना जगाउँछ, त्यसले मनमनै ऊसित यौनसम्बन्ध राखिसकेको हुन्छ।” (मत्ती ५:२८) पावलले पनि यसो भने, “शरीरका अभिलाषाहरू पूरा गर्न पहिल्यै योजना नबनाओ।”—रोमी १३:१४.
१५. हामीले कस्तो धन थुपार्नुपर्छ र किन?
१५ यहोवाको सेवामा खासै ध्यान नदिई धनी हुनेबारे मात्र सोचिरहनु पनि खतरनाक हो। वास्तवमा धनी मानिसले आफूसित भएको “धनलाई नै उच्च पर्खाल सम्झन्छ।” (हितो. १८:११) एकपटक येशूले एक जना धनी मानिसको दृष्टान्त बताउनुभयो, जसले “आफ्नो लागि धनसम्पत्ति थुपार्छ तर परमेश्वरको नजरमा चाहिं धनी हुँदैन।” उसले पछि नमीठो नतिजा भोग्छ। (लूका १२:१६-२१) हामीले यहोवालाई मन पर्ने काम गऱ्यौं भने उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। (हितो. २७:११) ‘स्वर्गमा धनसम्पत्ति थुपार्ने’ व्यक्तिहरूलाई यहोवा असल व्यक्तिको रूपमा हेर्नुहुन्छ। उहाँको नजरमा असल ठहरिएको छु भन्ने कुरा थाह पाउँदा हामी खुसी हुन सक्छौं। (मत्ती ६:२०) हामीसित भएको सबैभन्दा बहुमूल्य धन भनेको यहोवासित हामीले गाँसेको सम्बन्ध हो।
चिन्ता-फिक्रीलाई वशमा राख्नुहोस्
१६. चिन्ता-फिक्रीलाई वशमा राख्ने एउटा उपाय के हो?
१६ हामी “पृथ्वीमा धनसम्पत्ति थुपार्न”-मै लग्गू भयौं भने हामी चिन्ता-फिक्रीको दलदलमा फस्छौं। (मत्ती ६:१९) “यस संसारको फिक्री र धनसम्पत्तिको भ्रामक शक्तिले” गर्दा राज्यको वचन निसासिन्छ भनेर बुझाउन येशूले एउटा दृष्टान्त बताउनुभएको थियो। (मत्ती १३:१८, १९, २२) अर्कोतर्फ, केही मानिसहरू भने भविष्यमा आफूमाथि आइपर्न सक्ने समस्याहरूबारे अचाक्ली चिन्ता गरिरहन्छन्‌। तर त्यसरी चिन्ता गरिरहँदा शरीर कमजोर हुन्छ। त्यति मात्र होइन, यहोवासित हामीले गाँसेको सम्बन्धलाई पनि असर गर्छ। त्यसैले यहोवामा भरोसा गर्न नछोडौं र “चिन्तित हृदयले मानिसलाई अशान्ति ल्याउँछ, तर दयालु वचनले त्यसलाई आनन्द दिन्छ” भन्ने कुरा पनि मनमा राखौं। (हितो. १२:२५) हाम्रो अवस्था साँच्चै बुझ्ने व्यक्तिहरूबाट सान्त्वना पाउँदा हामीलाई आनन्द लाग्छ। सबै कुरालाई यहोवाले जसरी नै हेर्ने हाम्रा आमाबुबा, जीवनसाथी वा भरोसायोग्य साथीलाई आफ्नो मनको कुरा पोखायौं भने हामी आफ्नो चिन्ता-फिक्रीलाई वशमा राख्न सक्छौं।
१७. चिन्ता-फिक्रीलाई वशमा राख्न यहोवा हामीलाई कसरी मदत गर्नुहुन्छ?
१७ यहोवाले मात्र हाम्रो चिन्ता-फिक्री राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। पावलले यस्तो लेखे, “कुनै कुराको विषयमा चिन्तित नहोओ तर हरेक कुरामा प्रार्थना, उत्कट बिन्ती र धन्यवादका साथ आफ्नो निवेदन परमेश्वरसमक्ष जाहेर गर। अनि परमेश्वरको शान्ति, जुन सम्पूर्ण मानव विचारभन्दा उत्कृष्ट छ, त्यसले ख्रीष्ट येशूद्वारा तिमीहरूको मन र सोच्ने क्षमताको रक्षा गर्नेछ।” (फिलि. ४:६, ७) त्यसैले चिन्ताले सताइरहेको बेला यो कुरा सधैं मनमा राखौं: यहोवाले हामीलाई आध्यात्मिक रूपमा कमजोर हुन नदिन मण्डलीका साथीभाइ, विश्वासी दास, स्वर्गदूतहरू अनि येशूलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँ आफै पनि हामीलाई मदत गर्दै हुनुहुन्छ।
१८. कल्पना गर्ने क्षमताले हामीलाई कसरी मदत गर्छ?
१८ कल्पना गर्ने क्षमताले हामीलाई प्रेम अनि यहोवाका अन्य गुणहरू देखासिकी गर्न मदत गर्छ भनेर हामीले बुझ्यौं। (१ तिमो. १:११; १ यूह. ४:८) अरूलाई मनैदेखि प्रेम गऱ्यौं, आफूले गर्ने कामको नतिजाबारे पहिल्यै सोचविचार गऱ्यौं र अचाक्ली चिन्तामा डुबेर बसेनौं भने हामी साँच्चै आनन्दित हुन सक्छौं। त्यसैले यहोवाले दिनुभएको कल्पना गर्ने क्षमता चलाएर आफ्नो आशाबारे मनन गरौं अनि प्रेम, दया, बुद्धि र आनन्दजस्ता यहोवाका गुणहरूको देखासिकी गरौं।—रोमी १२:१२.